အောင်ထွန်းဦး: ဟာသ၀တ္တုတို (သတိရမိသော ပျော်စရာအချိန်များ)
ဘ၀ကို ပျင်းရိစွာ ဖြတ်သန်းနေရင်းဖြင့် အချိန်များ ကုန်လွန်မှန်း မသိသာစွာ ကုန်လွန် လာခဲ့ပါသည်။ လူတစ်ယောက်အဖို့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုရှိနေလျှင်ပင် ပျင်းရကောင်းမှန်း မသိ ဖြစ်တတ်သော်လည်း အလုပ်မရှိသော ကျွန်တော့်အဖို့ ပျင်းရိခြင်းဆိုသည်မှာ အဖော်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါသည်။
တစ်နေ့တာကို မည်သို့မည်ပုံ ဖြတ်သန်းရမည်ကို တွေးရင်းနှင့်ပင် အလွန်ပင် စိတ်မောချင်စရာ ကောင်းနေပါသည်။ ဒီလိုဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်အဖို့ သွားနေကျ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သည်သာလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေးမိသည်နှင့် သကာလ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ထထွက်ခဲ့တော့သည်။
"ဟေ့ကောင် သက်အောင်၊ လာလေကွာ၊ ရေနွေးကြမ်း သောက်ရအောင်"
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် အလကားရသော ရေနွေးကြမ်းများကို ထိုင်သောက်နေသော ဖိုးကျော်နှင့် အရိုးတို့ကိုတွေ့သည်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်း စားပွဲထိုးလေးက လောကွတ်ပြုသည်။
" ကိုကြီး၊ ဟိုနေ့ကအကြွေးသောက်ထားတာ မပေးသေးဘူးနော်၊ ဆိုင်ရှင်ကပြောနေ ပြီ "
"ဒီကလေးနဲ့တော့ကွာ၊ မင့်အကြွေးက ဘယ်လောက်မို့လို့လဲ၊ မင်းဟာက ထိုင်တောင် မထိုင်ရသေးဘူး၊ ဒီနေ့ မင်းအကြွေးကို အကျေချေမယ်၊ ရှင်းတယ်နော်၊ သွား၊ Birdy plane တစ်ခွက်သွားယူခဲ့ "
စိတ်တိုတိုနဲ့ပြောချင်ရာပြောလိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ကို ကြောင်ပြီးငေးကြည့်နေသော ဖိုးကျော်နှင့် အရိုးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
" ဘာလဲ၊ မင်းတို့က ဘာကြည့်တာလဲ "
" ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အကြွေးရှင်းမယ်စကားကြားလို့ မင်းပြောတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကြောင်ပြီး ငေးနေတာ၊ ငါ့ကောင်ကြီး ထောလာတယ် ထင်တယ် ဟိဟိ "
" ဘာမှ မထောလာဘူးဟေ့၊ ပျင်းလို့ထွက်လာပါတယ်ဆိုမှ အကြွေးလာတောင်းနေ လို့ ပြောလွတ်လိုက်တာ၊ ပိုက်ဆံဖြင့် ၂၀၀ ပြည့်အောင်တောင် ပါတာမဟုတ်ဘူး "
" ဟင်...၊ ဒါဆို အကြွေးရှင်းမယ်ဆိုတာက............."
" ထွက်ပြေးမှာဟေ့၊ သောက်ပြီးရင် ထွက်ပြေးမှာ...၊ ရှင်းပလား "
" ထွက်ပြေးစရာမလိုပါဘူးကွာ၊ မင်းတစ်ခွက်လောက်တော့ ငါတိုက်နိုင်ပါတယ်"
အသံကြားတာနဲ့တင် ပြေးထိုးချင်စရာကောင်းသော လောရှည် အသံကိုကြားလိုက်ရသည်။ ဒီကောင်က ထောသည်။ မိဘများက ကုန်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ငွေကိုရေလို သုံးနိုင်သည်။ အူတူတူ အတတဖြစ်တာမို့ ပေါင်းလို့သင်းလို့ကောင်းသည်။
" တိုက်ရင်လည်းတိုက်ပေါ့ကွာ...၊ ငါကတော့ ဘာအကူအညီမှ မပေးနိုင်ဘူး"
" အဟီး၊ မင်းကလည်း ကြိုသိနေတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့၊ မင်းတို့ သုံးကောင်လုံး ဒီည ငါ့ကိုကူညီစမ်းပါ၊ "
" နဒီ တို့အဆောင်မှာ ဂီတာသွားတီးဖို့ကလွဲရင် ကြိုက်တာပြော၊ ကူညီမယ် "
" လုပ်ပြန်ပြီကွာ၊ မင်းတို့ကလည်းက ငါစိတ်ကူးထားတာကို ကြိုသိနေသလိုပဲ၊ လုပ်စမ်းပါကွာ၊ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ကျော်မင်းတို့အဖွဲ့က ဒီညသွားကြမလို့တဲ့၊ ငါ့နဒီလေး အဲဒီကောင်နောက်ကို ဘယ်လိုမှ အပါမခံနိုင်ဘူးနော် ဟရောင် "
" အေး၊ ကျော်မင်းဆိုရင်တော့ ငါသိပ်ကြည့်လို့မရဘူးကွ၊ ရပ်ကွက်လူကြီးသားဆိုပြီး စွာကျယ် စွာကျယ်လုပ်လွန်းလို့ " ဖိုးကျော်က ၀င်ပြောသည်။
ကျော်မင်းကိုတော့ ဖိုးကျော်မှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံး ဘယ်သူမှ မကြည်ကြ။
" အေး၊ ကျော်မင်းလာမယ်ဆိုလို့ မင်းကံကောင်းတယ်မှတ်၊ ဒီည ဘယ်မှာစုကြမလဲ"
" ထုံးစံအတိုင်း လောရှည်အိမ်မှာပဲ စုကြမယ်၊ ဒီည လူကြီးတွေ ခရီးထွက်သွားတယ်၊ အိမ်မှာ ဒီကောင် တစ်ကောင်တည်း "
" အိုကေလေ...၊ ည ခုနှစ်နာရီ ဆုံကြတာပေါ့၊ နောက်မကျကြစေနဲ့ "
ညခုနှစ်နာရီပင်ရှိသေးသော်လည်း လမင်းကထိန်ထိန်သာလျက်ရှိပေသည်။ အိမ်မှ ဂစ်တာကိုထမ်းပြီး လောရှည်အိမ်ဖက် လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။ လောရှည်အိမ်တွင် အသင့်စောင့်နေသော သကောင့်သား သုံးကောင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
" သွားမယ် ဟရောင်၊ ဟိုကောင်တွေအဖွဲ့ သွားတာ ငါမြင်လိုက်တယ် " လောရှည်က စိတ်မရှည်တဲ့ လေသံနဲ့ပြောသည်။
" ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာ၊ ဟိုကောင်တွေသာ လောနေကြတာ၊ မင်းနဒီကဖြင့် ဆိုင်မှာခုမှ ထမင်းစားနေတုန်း "
" ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ၊ ဟိုကောင်တွေ ငါထက်စောရောက်နေတာ ငါမကျေနပ်ဘူးကွာ၊ နဒီလေးက အဆောင်ကို ပြန်အလာ ငါကိုမတွေ့ပဲ ဟိုကောင်တွေကိုတွေ့သွားရင်၊ မဖြစ်ဘူးကွာ၊ သွားမယ်ကွာ..သွားမယ်..."
" ပြီးရောကွာ.....၊ သွားမယ်.. သွားမယ်"
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောက်သွားတော့ ကျော်မင်းတို့အဖွဲ့ သီချင်းစဆိုနေပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းသည်က နဒီတို့အဖွဲ့ အဆောင်ကို ပြန်မရောက်ကြသေး။
ကျွန်တော်တို့လည်း ဂစ်တာကြိုးတွေဘာတွေညှိပြီး သီချင်းဆိုဖို့လုပ်မှ နဒီတို့အဖွဲ့ ရောက်လာသည်။ နဒီတို့ကိုမြင်တော့ ကျော်မင်းတို့က
" အိမ်ပြန်ချိန်ကိုတောင် မသိတော့ဘူး...... ပြန်လာမယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး.... ဒီကစောင့်နေသူ....အိုး....စောင့်နေသူ.... ရယူခြင်းမဟုတ်ရင် အချစ်ကဘာလဲ"
" အချစ်....ဆိုတာ ရယူခြင်းမှ မဟုတ်ဘဲ မဏိစန္ဒာ "
" အစဉ်သာပေးဆပ်ရင်း မင်းနောက်ကွယ်.... တိတ်တိတ် လေးပဲချစ်သွားမယ်"
" တစ်ခါတုန်းက ဒို့ရွာမှာ သဘောကောင်းပြီး ဆင်းရဲတဲ့ ကျော်မင်းလို့ အများ ခေါ်တဲ့ ပေါချာချာ လူတစ်ယောက်ရယ်၊ သူတို့ရပ်ကွက်အလယ် မုဆိုးမကြီးတစ်ယောက်ကို ရင်မှာသိုသိပ် တိတ်တိတ်သာ ချစ်ရှာနေတော့တယ်"
ကျော်မင်းသူ့နာမည်ထည့်ဆိုတော့ ခံပြင်းသွားပုံရသည်။ နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပြောင်းဆို သည်။
" နေညိုချိန်တိမ်တောက်တဲ့ခါ ရွာလမ်းနဘေးမှာ စာဥတို့သူငယ်ချင်းနှမတွေ
" အိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့၊ အိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့ "
" ကားလေးစီးလို့မင်းနဲ့အတူလျှောက်လို့လည်မယ်...အပျော်ဆုံးပေါ့..ဒို့ရင်ထဲ "
" ကားလေးတစ်စီးတောင်သူမပိုင်၊ အပြောလေးကောင်းပြီးချစ်တော့ ယုံတာပေါ့
" ကိုယ့်ချစ်သူကို ကတ်တီပါ ဖိနပ်စီး၊ ရွှေထီးလေးပဲ ဆောင်းစေချင်သည်။ "
" လျှောက်မညာနဲ့၊ လျှောက်မညာနဲ့"
" တစ်ကယ်ပါ. ချစ်တယ်..ချစ်တယ်..ချစ်တယ်...ကိုယ်မင်းကို "
" မင်းရဲ့ ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီး ငါရိုက်ချိုးပစ်တော့မယ် "
" ဒီလိုညတိုင်း၊ ငါနဲ့မင်း....."
" အို တော်ပါကွယ်၊ တန်ပါကွယ်၊ ကဲလွန်းသဲလွန်းတယ်"
ကျော်မင်းတို့ဘယ်လိုဆိုဆို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်း မရရအောင် လိုက်ဖျက်ဆို သည်။
" ချွေးစက်များနဲ့ ဘ၀ဟာကြမ်းတမ်းနေလည်း အားပေးတတ်တဲ့ချစ်သူ၊
" ငါမင်းကို သတ်ချင်တယ်....."
" တေးသွားဆိုသီကာကြူးတဲ့ ကျေးငှက်ကို လှမ်းလို့ကြည့်ကာ.."
" အိမ်ရှေ့ပြတင်းပေါက်က ငှက်စုတ်တွေလည်း လာပြီး မနှိုးကြနဲ့... "
" ငှက်ကလေးများက တိုးတိုးလေးပြောသွားတယ် မင်းချစ်သူမင်းကို မုန်းပြီတဲ့..."
" ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ"
" လှပြီးသား မင်းမျက်နှာပေါ်မှာ ဘာမှမလိမ်းပါနဲ့.. ရွှေရည်စိမ်..ငွေရည်စိမ်
" အတူတူနေဖို့ ဘယ်လောက်ထိ ဝေးရမလဲ "
" ကိုယ်တို့ဝေးနေ မိုင်ပေါင်းကုဋေ....... "
ကြာလာတော့ ကျော်မင်းတို့အဖွဲ့ ဆက်ဆိုလို့မရတော့။ ကျော်မင်းက ကျွန်တော့်တို့ ဆီကိုလာပြီး
" မင်းတို့ဟာကလွန်ပြီကွာ.. ဘာလို့ ငါတို့ဆိုတာ လိုက်နှောင့်ယှက်နေရတာလဲ "
" ဟမ်...၊ အဆန်းပါလား၊ ငါတို့လည်း မနှောင့်ယှက်ရပါလား၊ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် ဆိုနေကြတာပဲလေ "
" မင်းတို့ဟာက ငါတို့သီချင်းကိုလှောင်နေသလို လိုက်ဆိုနေတာကြီးကို "
" မလှောင်ရပေါင်ဗျာ..၊ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် ဆိုကြတာကိုများ ဘယ်နှယ့် လှောင်တယ် ထင်ရတာတုံး၊ ကျော်မင်းရ "
" မင်း...မင်း... မှတ်ထားပေါ့ကွာ..."
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကျော်မင်းသူ့အဖွဲ့တွေဆီ ပြန်သွားပြီး တိုးတိုး တိုးတိုးနှင့် တိုင်ပင် နေကြသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို မကြည်သလိုကြည့်ပြီး တစ်ဖွဲ့လုံး ပြန်သွားကြသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ပြိုင်ဘက်ကင်းမဲ့စွာ ကျွန်တော်တို့ လေးယောက်သည် နဒီ တို့ အဆောင်အား ကောင်းကောင်းကြီး နားဒုက ပေးပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့လေတော့သည်။
ညက အိပ်ရေးပျက်သောကြောင့် နံနက် (၁၀) ခန့်မှ အိပ်ယာက နိုးတော့သည်။ ဒီအချိန်ဆို ဖေဖေနှင့် မေမေတို့ အလုပ်သွားလောက်ပြီ။ ဗိုက်ကဆာလာသောကြောင့် နံနက် စာစားရန် အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်။
စားပွဲပေါ်တွင် အဆင်သင့်စားရန် တင်ထားသော နံနက်စားကို စားနေရင်း အိမ်ရှေ့ တွင် လှမ်းခေါ်နေသော ချက်စူအသံကို ကြားလိုက်ရသည်။
" ကိုကြီး သက်အောင်၊ ကိုကြီး သက်အောင် "
" ဘာလဲကွ ချက်စူရ"
" ဒီမှာ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ကိုကြီးကျော်မင်းက စာပေးခိုင်းလိုက်လို့ "
" အေး..၊ ကျေးဇူးကွာ...."
ထူးခြားစွာ ရောက်လာသော ကျော်မင်း၏စာအား ဖောက်ဖတ်ကြည့်မိသည်။
" ညီလေး သက်အောင် "
စာစဖတ်ကတည်းက အချိုးမပြေ... ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီအရွယ် ညီလေးလို့ ခေါ်စရာ အကြောင်းမရှိပဲ ညီလေးလို့ ခေါ်တာ ထူးတော့ထူးပြီ။ ကျောချင်တဲ့ သဘောလားမသိ။
" ညီလေးနဲ့ မနေ့ညကကိစ္စကို အစ်ကို့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မထားပါဘူး.. ဒါပေမယ့် အစ်ကို့သူငယ်ချင်းတွေက စိတ်သိပ်ကြီးတယ်ကွာ.. သူတို့က ညီလေးတို့နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ဆွေးနွေးချင်လို့တဲ့၊ အဲ့ဒါ နက်ဖြန် နံနက် (၈း၀၀) နာရီတိတိ ညီလေးတို့ ရပ်ကွက်နဲ့ ကိုကြီးတို့ ရပ်ကွက်ကြားမှာ ပေါက်နေတဲ့ ညောင်ပင်ကြီးအောက်ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်တဲ့။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ရှိလို့ ညီလေးတို့ ဖက်က (4) ဦးကိုပဲ ဖိတ်ပါတယ်တဲ့။ အစ်ကိုတို့ (၄) ဦးနဲ့ ညီလေးတို့ (၄)ဦး ပြေပြေလည်လည် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား...။ လာဖြစ်အောင်လာနော်..။ မလာရင် စိတ်သိပ်ဆိုးမှာ သိလား...။
ကျော်မင်း (ခ) ရပ်ကွက်လူကြီး၏ တစ်ဦးတည်းသောသား
" တောက်၊ ချိန်းပွဲဆို ချိန်းပွဲပေါ့ .... စာကိုရေးထားလိုက်တာများ... ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံ ၀တ်သွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ "
စာကို ဖတ်ပြီး ဖိုးကျော် ပေါက်ကွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိုးကျော်က ဒါမျိုး အတွေ့အကြုံ ရှိသည်။ ရန်ဖြစ်ပြီး အချုပ်ကို (၄) ခါတိတိကျဖူးသည်။
" မင်းတို့ဘယ်လိုသဘောရလဲ..၊ ငါကတော့ အကျောမခံဘူးနော်..၊ သွားမှာပဲ၊ မင်းတို့ လိုက်ချင်လိုက်၊ မလိုက်ချင်နေ..."
" မဟုတ်ဘူးလေကွာ..၊ မင်းသွားမှတော့ ငါတို့မလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ် မလဲ.. ဟေ့ကောင် အရိုးနဲ့ လောရှည် မင်းတို့ကော လိုက်မှာ မှတ်လား..."
တာဝန်အရ ခေါင်းငြိမ့်ခြင်းမျိုး ခေါင်းငြိမ့်ကြသည်။ မတတ်နိုင် (၂) ယောက်တည်း သွား တာထက်စာရင် (၄) ယောက်ဆိုတော့ လူရှိန်နိုင်သည်။ နက်ဖြန် နံနက် (၇း၃၀) တွင် ထုံးစံအတိုင်း လောရှည် အိမ်တွင် လူစုရန်တိုင်ပင်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင် ဆင်ကြရမည်။ ဒီအကြောင်းတွေကို လူကြီးများ သိလို့မဖြစ်။ ဒါကြောင့် သိုသိုသိပ်သိပ် ပြင်ဆင်ကြရမည်။
နက်ဖြန် နံနက် (၈း၀၀) မှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကတော့ ရှိလေပြီ။
ဒီမနက် အကြောင်းတွေးနေရင်းနှင့် ညကသိပ်အိပ်မပျော်။ လူငယ်ပီပီ ရန်ဖြစ်ဘူး သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ချိန်းပွဲကိုမူ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသေး။ ညကတော့ ပြင်ဆင်စရာ ရှိတာတွေ ကို ဟိုကောင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ထားသည့်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ ဘာရယ်ကြောင့်မသိ ယနေ့ နံနက်မှ ဘုရား ရှိခိုးချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာလို့ ဘုရားရှိခိုးရာ သြကာသကို တစ်ဝက်မှာ မေ့နေလို့ ထခဲ့ရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ဘက်တွင် ဖိုးကျော်ရှိသည်။ ဖိုးကျော် သာ အားကိုးရာသဘောထားပြီး ဖိုးကျော် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း လောရှည် အိမ်သို့ ထွက်ခဲ့တော့သည်။
(၈း၀၀) နာရီမထိုးမီ (၁၅) မိနစ်အလိုတွင် ကျွန်တော်တို့ (၄) ယောက်အဖွဲ့ ညောင်ပင် အောက်သို့ ရောက်နှင့်နေပြီ။ ဟိုကောင်တွေကိုတော့ အရိပ်အယောင် မမြင်ရသေး။ (၈း၀၀) နာရီထိုးမှ ကျော်မင်းတို့အဖွဲ့ရောက်လာသည်။
" အချိန်သိပ်တိကျတယ်ပေါ့" ဖိုးကျော်က ခနဲ့လိုက်သည်။
" ဒါပေါ့.. အချိန်တိကျကြောင်းပြချင်လို့ ၈း၀၀ နာရီထိုးမှ ဟိုဂျောင်က ထလာတာ"
ကျွန်တော်က " ဒါတွေ အရေးမကြီးပါဘူး..။ မင်းတို့ဒီကို ခေါ်တာ ဘာကိစ္စလဲ"
"ပြောမှာပေါ့..။ မင်းတို့ကို ဟိုနေ့ကိစ္စကိုမကြည်လို့..။ မင်းတို့ကိုဖဲ့ မလို့ခေါ် တာဟေ့..."
ထင်တဲ့အတိုင်းပင်..၊ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် အသင့်ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေထုတ်ကာ အသင့်အနေအထား နေလိုက်ကြသည်။
ကျော်မင်းက ရုတ်တရက် လက်ခုတ်တီးလိုက်သည်။ ညောင်ပင်နောက်မှ ကျော်မင်း အဖေ ရပ်ကွက်လူကြီးနှင့် အခြားလူကြီးတစ်ချို့ ထွက်လာကြသည်။
" ဖေကြီး ကြည့်ပါဦး၊ သားတို့က ရပ်ကွက်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ဆွေးနွေးဖို့ ကို သူတို့က ဒုတ်တွေဓါးတွေနဲ့"
" ဟမ်၊ မင်းတို့ပဲ ဖဲ့မှာဆို"
" ငါတို့လည်း မပြောရပါလား"
"ကြည်လိုက်တာမှ လွန်ရော ဒီလောက်ချစ်စရာကြီးကို"
"ဖေကြီးရေ...အဲဒါသာကြည့်တော့.. သူတို့မကြည်တိုင်း သားတို့ကိုချည်း လွဲချနေ တာ.. ဖေကြီး လက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ပိုဆိုးမှာနော်..."
"ကဲ မင်းတို့က ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ကလေးတွေမှတ်လား..ငါ့ရပ်ကွက်ထဲက ကလေး တွေကို ဒုတ်တွေ၊ ဓါးတွေနဲ့ ၊ မင်းတို့က ဘာတွေလည်း"
ခံလိုက်ရပြီ။ လှလှပပကို ခံလိုက်ရပြီ။ ထင်တော့ထင်သား..။ ညီလေး ဆိုကတည်းက မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်သား.။ မတတ်နိုင်တော့ ကြုံသလို့ ကြည့်ရွှီးရတော့မည်။
"ကျွန်တော်တို့လည်း ရပ်ကွက်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ဆွေးနွေးဖို့လာတာပါ"
" လက်ထဲမှာ တုတ်ကြီးနဲ့ကို"
"ဟိုလေ..ဒါက..လမ်းမှာတွေ့လို့ကောက်လာတာ.. ဘာမှမဟုတ်ဘူး..ဦးတို့အိမ်မှာ ထင်းကုန်နေတယ်မှတ်လား..၊ ထင်းစိုက်ဖို့ယူထားလိုက်နော်..။"
“အေး.. ထင်းကုန်နေတာနဲ့အတော်……. ၊ ဟဲ့ကောင် မနောက်နဲ့နော်..”
"အိမ်ကဆိုင်ကယ်ပေါ့ဗျာ..ဒီကိုအလာမှာ ချိန်းကြိုးပြတ်သွားလို့ အဲဒါ ဦးလေးယူ သွား လိုက်ပါတော့.၊ ဦးလေးအိမ်မှာ ခွေးချည်ထားပေါ့"
"ဟေ့ကောင်၊ အိမ်မှာ ခွေးမမွေးဘူးကွ"
"အေး...၊ ဒါတော့ မတတ်နိုင်လို့မွေး.........၊ ဟေ့ကောင် ဘာစကားပြောတာလဲ၊"
"ဟိုကောင်ကကော.. လက်ထဲမှာ ခါးပတ်ကြီးနဲ့"
"ဒါကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ် ဥကြီး"
"ဦးကြီး၊ နင့်မေ ဥကြီး ရမှာလား"
“သြော်၊ ဒီလိုပါဦးကြီး..၊ ခါးပတ်ဆိုတာက ဘောင်းဘီမှာပတ်ရတယ်မှတ်လား”
“ကျွန်တော်အခု ဘောင်းဘီဝတ်လာတယ်..။ ခါးပတ်ပါလာတာ အပြစ်လား”
“အပြစ်မဟုတ်..၊ ဟာ. ရှုပ်နေတာပဲကွာ..”
“မင်းကရော၊ ဓါးကြီးနဲ့ ဟိုကောင်တွေလို ဘာဆင်ခြေမှပေးမယ် မကြံနဲ့နော်”
“ဦးရဲ့၊ နင့်မေကလား ဥရဲ့ ရမှာလား၊ ဟာကွာ ဒီကောင်တွေ သေတော့မယ်”
“သြော်….ဦးရဲ့၊ သားတို့က ဆင်းရဲတယ်မှတ်လား..”
“အဲဒါဘာဖြစ်သလဲ…၊ အဲဒါဘာဖြစ်လဲကွာ…၊ စိတ်မရှည်တော့ဘူးနော်”
“ဆင်းရဲတော့ ထင်းမ၀ယ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ထင်းခွေဖို့ ဓါးယူလာတာ ကျွန်တော့် အပြစ်လားဗျာ”
“အပြစ်မဟုတ်........၊ ဟာကွာ… မင်းတို့ တော်တော်တတ် နိုင်တဲ့ကောင်တွေ၊ အကုန်လိုက်ခဲ့ကွာ ၊ ရုံးရောက်မှရှင်း”
“ဟာ..ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ.. ကျော်မင်းဆိုတဲ့ကောင်က ပေါတောတော ကြောင်တောင် တောင်နိုင်ပေမယ့် သူ့အဖေကတော့ သူ့သားလိုမဟုတ်ပဲ သဘောကောင်းပြီး ရုပ်ချောကြောင်း ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ သတင်း ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျ.."
“ခုမြင်ဖူးမှပဲ ဒီလိုသတင်းထွက်တာ မဆန်းဘူးလို့ သိတော့တယ်…၊ အနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲက လူကြီးက အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသိလား..၊ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရုံးကြီးပဲ လိမ့်ခေါ်တာ..၊ လူမုန်းလည်း တော်တော်များရှာပါတယ်…၊ ဦးလေးနဲ့တော့ အတော့်ကို ကွာမယ့်ပုံပဲဗျ…"
ကျော်မင်းအဖေမျက်နှာတွင် အပြုံးတစ်ပွင့် တွေ့လိုက်ရသည်။ မဆိုးဘူး… ဒီဘဲကြီး မြှောက်ပင့်ပြောတာ ကြိုက်ပုံရသည်..။
“ဦးလေးသား ကျော်မင်းက ဦးလေးသားအရင်းမှ ဟုတ်ရဲ့လား..၊ အန့်တီကို သေချာပြန်မေး ကြည့်ပါအုံးလား…ရုပ်ချင်းက အတော့်ကို ကွာနေလို့လေ… မသိရင် သားနဲ့အဖေတောင် လူချင်းမှားလောက်တယ်နော်.. ”
“ဒီမှာ ဟေ့ကောင်တွေ….၊ တော်တော့…၊ မင်းတို့ ဘာပြောစရာကျန်သေးလဲ…၊ ပြီးရင် မြန်မြန်ပြန်တော့…လစ်တော့..ဂျောင်းတော့..”
“သြော်၊ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါလို့နော်. နောက်နောင် ဒီလိုမျိုး မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်ဗျာ။ နော် ဟရောင်တွေ”
“ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ..။ ဒီတစ်ခါတော့ မသိသားဆိုးဝါးလေးတွေမို့လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ”
“အေး၊ မင်းတို့ကို ပထမဦးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်.. ၊ နောက်ခါ ဒါမျိုးဖြစ်ရင် ငါခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်..”
“ဒါသက်သက်အကွက်ဆင်တာကွ….၊ သူ့အဖေရှေ့မှာ ငါတို့ကို ကောင်းကောင်း အရှက်ခွဲ လိုက်တာပဲ”
“အေးကွ၊ ခွေးထွေးလို့ ၀က်မစား၊ ဘီလူး ခုနှစ်ရက်ဖျားတဲ့ သူ့အဖေရုပ်ကိုလည်း မြှောက်ပင့် ပြောရသေးတယ်ကွာ…၊ ” အရိုးက ၀င်ပြောသည်။
“နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ..၊ ထင်းခွေမကြုံ၊ ရေခပ်ကြုံမှာပါ..၊ အဲဒီခါကျမှ ဒီကောင့်ကို ပညာလှလှကြီး ပြန်ပေးရမယ်…”
“ နေနှင့်ဦးပေါ့….၊ ကျော်မင်းရယ်……”
ဒီနေ့တော့ အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးကာရှိသေး၊ လောရှည်၊ ဖိုးကျော်နဲ့ အရိုးတို့ ပေါက်ချလာသည်။
“ ဘာသတင်းထူးလဲကွ ”
“ကျော်မင်းတို့အိမ်မှာ နက်ဖြန်အလှူလုပ်မယ်လို့ ကြားတယ်…အဲဒါ မင်းမှာ ဘာအစီအစဉ်ရှိလဲလို့ လာမေးကြတာ”
မဟုတ်မက အကြံဆို ထွက်တတ်သော ကျွန်တော့်ခေါင်းအား စတင်အလုပ်ပေးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ အလွန်တရာမှ ကောင်းသော အကြံတစ်ခုထွက်လာလေပြီ။
“ဒီလိုဟေ့…၊ မင်းသူတို့ရပ်ကွက်ထဲက အရူးမ ကြေးမုံကို သိတယ်မှတ်လား”
“ဒီလိုကွာ…၊ အရူးမကြေးမုံကိုခေါ်၊ ပြီးတော့………………………………………………”
“ ကျော်မင်း မနက်ဖြန်အလှူမှာ ဒုတ်ခရောက်စေရမယ်….”
အလှူပွဲမှာ စည်ကားလှသည်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ကြသူများမို့ မြို့မျက်နှာဖုံး၊ အရာရှိ မင်းများနှင့် လူကြီးလူကောင်းများ အားလုံးအလှူပွဲသို့လာကြသည်။ နယ်ဝေးမှ အမျိုးအားလုံး ကိုပါ ဖိတ်ထားသောကြောင့် ပွဲကြီးသကဲ့သို့ စည်ကားသိုက်မြိုက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျော်မင်းမှာမူ ဖိတ်ထားသော သူငယ်ချင်းများကို တစ်ဝိုင်းပြီး တစ်ဝိုင်းဧည့်ခံနေလေ သည်။ နဒီရှိနေသောဝိုင်းတွင်မူ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ သွားသွားထိုင်နေပြီး ၄င်း၏ မျက်နှာမှာ ချိုချဉ်ကို ပျားရည်ထဲနှစ်ထားသကဲ့သို့ ချိုမြနေလေတော့သည်။
ထိုစဉ် အပြင်က အသံတစ်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။
“အရူးမကြေးမုံ၊ မုန့်လာတောင်းနေတယ်ဟေ့၊ နည်းနည်းပါးပါး ပေးလိုက်ပါဦး”
“ရော့ ကြေးမုံ၊ မုန့်ယူ၊ ပြီးရင်ပြန်တော့နော်…၊ ဒီမှာက ဧည့်သည်တွေအများကြီး”
“ငါ့ကိုမုန့်မကျွေးနဲ့လေ…၊ ငါက နင်တို့ကို မုန့်ပြန်ကျွေးရမှာလေ….”
“သြော်….ဒီအရူးမ၊ ယူစရာရှိတာ မြန်မြန်ယူပြီး ပြန်တော့…”
“အောင်မယ်..၊ ငါ့မင်္ဂလာဆောင်လည်း လာသေး၊ ငါ့ကိုများ အော်လား ဟောက်လားနဲ့ နင် ငါ့ယောင်္ကျား ကျော်မင်း အကြောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်..”
“ငါ့ယောင်္ကျား ကျော်မင်းခေါ်ပေး၊ သူပဲငါ့ကို မင်္ဂလာဆောင်ပါ့မယ် ပြောခိုင်းပြီးတော့၊ ဘယ်မှာလဲ ကျော်မင်း၊ ခုခေါ်ပေး”
“ဟဲ့ ဒါကအလှူလေ.၊ ဘာမင်္ဂလာဆောင်မှ မဟုတ်ဘူး…”
“ဘာမင်္ဂလာဆောင်မဟုတ်ရမှာလဲ၊ ကျော်မင်းနဲ့ ကြေးမုံ၊ ကြေးမုံနဲ့ ကျော်မင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ လက်ထပ် ထိမ်းမြှား ရစ်ဖွဲ့ခြင်း အခမ်းအနား”
ရှေ့မှ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အသံများကြောင့် အလှူလာဧည့်ပရိတ်သတ်များ အားလုံး အပြင် သို့ ထွက်ကြည့်ကြသည်။
“အေးဟယ်…၊ ကျော်မင်းတို့များ အရူးမတောင် ချမ်းသာမပေးဘူး၊ ကြေးမုံလေး သနားပါတယ်”
ပရိတ်သတ်ထဲမှလည်း အသံသဲ့သဲ့ကြားရသည်။ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးနေပြီး ကျော်မင်းတို့သားအဖ ထွက်လာသည်။
“ကြေးမုံ၊ နင်ပြန်ပါတော့ဟာ…၊ နင်ဘာတွေလာ ရှုပ်နေတာလဲ…၊ ပြန်ပါတော့၊ ဒီမှာ ဧည့်သည်တွေ အားနာဖို့ကောင်းနေပြီ” ကျော်မင်းက ငိုသံကြီးနှင့်ပြောသည်။
“ဒီမှာ ကြေးမုံ၊ နင်ပြန်ရင်ပြန်တော့၊ မပြန်ရင် ငါတို့ကို အသရေ ဖျက်မှု၊ ပိုင်နက်ကျူး လွန်မှုတွေနဲ့ တရားစွဲပြီး ထောင်ချ ပစ်လိုက်မယ် …နားလည်လား… ပြန်တော့” ကျော်မင်း အဖေက ထုံးစံအတိုင်း အာဏာသံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်သည်။
“ဒီမှာ ကိုကျော်မင်း၊ ကျွန်မဟာ ရှင့်ရဲ့အချစ်တွေ၊ အကြင်နာတွေကို ရခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပျော်နေခဲ့တာ၊ ရှင့်မျက်နှာကို မြင်နေရရင် ထမင်းမစား၊ ဟင်းမစား နေနိုင်တဲ့အထိ ရှင့်ကိုချစ် ခဲ့တာပါ၊ အခုဒီကိုလာတာကလည်း ရှင့်မျက်နှာကို မြင်ချင်တွေ့ချင်တဲ့စိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ လာခဲ့တာပါ”
နားထောင် နေရတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့ စိတ်မကောင်းကြ။
“ရှင်က သွားဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပြောရုံနဲ့ ရှင်နဲ့အဝေးဆုံးကို ရှင်ကျေနပ်အောင် ရင်နာနာနဲ့ ထွက်သွားမဲ့ အချစ်ကြီးတဲ့ ကြေးမုံလေးပါရှင်၊ ရှင်နဲ့ကျွန်မ ချစ်ခဲ့တာကို ရှင့်ဘက် က တစ်ခဏလို့မှတ်ယူ ပေမယ့် ကျွန်မကတော့ တစ်ဘ၀ ပါပဲရှင်”
နားထောင်နေတဲ့ ဧည့်သည်များ မျက်ရည်စို့ကုန်ကြပြီ။ ကျော်မင်းတို့သားအဖလည်း ဘုမသိ ဘမသိ ဘာပြောရမှန်းမသိပဲ ကြောင်အအ ကြီးဖြစ်နေကြသည်။ မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ မာန်ပါပါ ပြောနေသော ကြေးမုံကိုသာ ငေးကြည့်နေမိကြသည်။
“ကျွန်မက ရှင်နဲ့ဒီတစ်သက်ပေါင်းရပြီဆိုပြီး ပျော်နေခဲ့တာပါ..၊ ဒါပေမယ့် ရှင့်ရဲ့ အခုလို သူစိမ်းဆန်တဲ့ အပြုအမူကြောင့် ကျွန်မရင်ကို ဓါးနဲ့ဟက်တက်ခွဲတာထက်တောင် နာကျင် ခံစားရပါတယ်ရှင်…။ ရပါတယ်….။ ရပါတယ်…။ ရှင်ကသွားလို့ နှင်တော့လည်း သွားရပါတော့ မယ်….”
မျက်ရည်မခိုင်တဲ့လူတွေ မျက်ရည်တွေသုတ်နေကြပြီ၊ လူကြီးတွေကတော့ မျက်နှာလွှဲ သူကလွှဲ၊ မော့သူကမော့နှင့် တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်။
“ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့မှတ်ထားပေးပါ…၊ အဲဒါကတော့ ကျွန်မဘယ်ရောက်ရောက် ရှင့်ကို ချစ်နေမယ် ဆိုတာပဲ ကိုကျော်မင်း……၊ ဟင့်………….၊ ဟင့်……….
အဲဒါသက်အောင်တို့ ငါ့ကို ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ပေး ပြီး ကျက်ခိုင်းထားတဲ့ စာသားတွေ.. ဟိ.ဟိ..”
“ဟာ”၊ “ဟမ်”၊ “အို”၊ “အာ”
“ဒီအရူးမကွာ၊ သေတော့မယ်…၊ သွားသွား၊ နင်သွားတော့၊ ငါတို့ကအဟုတ်မှတ်လို့”
“ကြက်သွန်နီ ဖြည်းဖြည်းခွာပါဟဲ့၊ ဒီမှာ မွှန်လို့မျက်ရည်တောင်ကျကုန်ပြီ”
“မျက်စိထဲ ဖုန်ဝင်သွားတာ၊ မျက်ရည်တွေတောင်ကျကုန်ပြီ”
“မနေ့ကတည်းက မျက်စိနာနေတာ၊ ဒီနေ့ပိုဆိုးပြီး နီတောင်နီလာတယ်”
ဒီအချိန်မှာ တစ်နေရာမှ ချောင်းကြည့်နေသော လူလေးဦးမှာလည်း မျက်ရည်များ ကျလျက် ရှိပါသည်။ သူတို့လေးယောက်မျက်ရည်ကျရခြင်းမှာ အခြားအကြောင်းများ ကြောင့်မဟုတ်၊ အူလှိုက်သည်းလှိုက် ရီထားရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်သောသူမှာလည်း မျက်ရည်များကျလျက်ရှိသည်။ ထိုသူမှာ မျက်ရည်များ ကျရုံတင်မကပဲ ပါးစပ်မှလည်း အဆက်မပြတ် တတွတ်တွတ် ရွတ်ဖတ်လျက် ရှိနေလေသည်။
“ နေနှင့်ဦးပေါ့ ……….သက်အောင်ရယ်……….”
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 9:25 PM